Ukuzola kwindawo engaphandle; Igumbi lokujonga iLake
Ifakwe kweyona ndawo intle yePokhara kuMantla eLake Side, le ndawo inomtsalane yosapho lweHomestay ilungile kwabo bafuna indawo ephumlayo kunye neyomelezayo yasemaphandleni ukubaleka kubomi obuphithizelayo bedolophu. Indawo ejikelezileyo ngoku inomtsalane kunye neenduli ezigudileyo kunye nembono echibini. Amagumbi asibhozo lilinye liyilwe ngokukhethekileyo ukudibanisa iimbono ezimangalisayo kunye nentuthuzelo kunye noxolo.
Kukho ibalcony entle enelanga ngaphandle kwegumbi lakho .Uyakwazi ukuzijonga nje ujonge echibini, ukonwabela ukungcangcazela kwendalo ukumamela isandi seentaka. Kukho itafile elungele ilaptop ngaphandle. Konwabele ukutya okuvela kwigadi yethu kwaye ukuba uyathanda ukwenza i-yoga entle eluphahleni lwethu.
Indawo yam ikakhulu ilungele abantu abafuna ukuhlala nendalo noxolo. Inoxolo kakhulu ngeenxa zonke. Zimbalwa izindlu ezikufutshane. Kukwakho nequla lokuqubha elikufuphi ukuze uphole ehlotyeni.
Amaxesha amaninzi ndikwipropathi ukuba akunjalo ungafowuna okanye undithumelele umyalezo.